विद्वानहरूलाई प्रश्न– प्रधानमन्त्रीप्रति शंका किन ? - Dainik Nepal
मिना श्रेष्ठ २०७५ असोज ४ गते १६:०७
अपराधको छायाँ पहिल्याउन कठिन हुन्छ । त्यसमाथि बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध । जसले हरेक दिन बाँच्दा पनि मरेको अनुभुत गराइरहन्छ, झस्क्याइरहन्छ । राजनीतिको हरेक छायाँ पहिल्याउन सकिन्छ । जब राजनीतिक निकृष्ट तहमा सामाजिक अपराध जसमा सरकार आफैं गम्भिर छ, त्यस विषयबाट हुर्मत लिने योजनबद्ध हिसाबमा अघि बढ्छ ठ्याक्कै पत्ता लाग्छ, चित्र । यो चित्र अहिले नेपाली राजनीतिमा पनि देखिएको छ । प्रतिपक्ष, सामाजिक अभियन्ता र अनेक नाममा । यसलाई पछि जोडौंला ।
हाम्रो देशमा महिला माथि विभिन्न प्रकारका हिंसाका घटनाहरू घट्ने गर्छन् । ती मध्ये अहिले बलात्कारको घटना अत्यधिक भएको छ या गराइरहेको छ यसको पनि छानबिन हुन बाँकी छ ।
दुई तिहाईको सरकार भनेर यो सरकारको पालामा यस्तो भयो भनेर सरकारको गलत प्रचारप्रसारको निम्ति पनि यस्तो क्रुर निन्दनीय काम गराइएको पनि हुनसक्छ । तर योजनाबद्द भए पनि या यौन कुण्ठालाई अपराधिकरण भएको भए पनि यो अपराध हो, अपराधी कुनै हालतमा सजायको भागीदार बन्नैपर्छ । अहिले झन्डै दुई महिना अगाडि सुदूर पश्चिम कन्चनपुरकी निर्मला पन्त हत्याकाण्डको अपराधी पक्राउ गर्न सार्वजनिक गर्न हम्मे हम्मे परेको या बनाइएको अवस्थालाई सरकार र गृह प्रशासनको बदनाम गराउन खोजिँदैछ ।
प्रहरी प्रशासन कोही एकले त्रुटि गर्ला तर सिंगो संस्थालाई आरोपित गर्न हुँदैन । हाम्रो सुरक्षाको भरोसा प्रहरी नै हो । त्यो भरोसा नरहे कहाँ जाने ? केही शक्तिले अपराधीको अपराध लुकाउनु खोज्यो होला तर अपराधी उम्कनु पाउँदैन । अपराधी कसैको आफन्त हुँदैन, अपराधीको जात हुँदैन, कुनै धर्म हुँदैन, अपराधीको कुनै पेशा पनि हुँदैन । उसको एउटै परिचय अपराधी हो ।
सन्तानबिहिन र आफ्नै जीवन आज हो कि भोलि हो भन्ने अवस्थामा बाँचेका प्रधानमन्त्री माथि शंकाको नजर तेर्सिएको हो ? होइन भने के हो तपाईहरूको आलोचनाको भित्री रहस्य ? घटनाले यो रुप लिँदा समेत सरकारले अपराधी संरक्षण गरेको शंका छ तपाईंहरूलाई ? किन गर्छ सरकारले आफै बद्नाम हुने गरेर यस्तो अपराधीको संरक्षण ?
अपराधीको तत्काल पहिचान हुन सक्थ्यो तर प्रहरीकै लापरबाहीले अनुसन्धान लम्बियो । जिल्लाका एसपी, सिडिओलगायत घटना स्थलमा पुगेका थुप्रै सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले कारबाही गर्दै निलम्बन गर्नुले पनि देखाउँछ । अझ डिएनए पनि परिक्षण भयो ।
घटना भएको जिल्लामा सरकारले छानबिन समिति समेत पठाएको छ । छानबिन समितीले अनुसन्धान गर्दैछ । अनुसन्धान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले गर्ने पक्कै होइन । ऊनीहरूले खटाएको मान्छेले वास्तविकता बाहिर ल्याउन पर्छ नै ! सरकारप्रति विश्वस्त हुनुको विकल्प छैन । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले निर्मला पन्तका बुवाआमालाई भेटेर अपराधी पत्ता लगाउने वाचा गरिसक्नुभएको छ ।
तर यस प्रकरणमा काठमाडौंमा सरकारविरुद्ध नारा लगाउने विद्वानहरूलाई म नम्रताका साथ सोध्छु – कृपया तपाईहरूलाई बलात्कारीको संरक्षण प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री राम बहादुर थापा (बादल)ले गरेको आशंका लागेको हो ? यस्तो आशंका किन ?
सन्तानबिहिन र आफ्नै जीवन आज हो कि भोलि हो भन्ने अवस्थामा बाँचेका प्रधानमन्त्री माथि शंकाको नजर तेर्सिएको हो ? होइन भने के हो तपाईहरूको आलोचनाको भित्री रहस्य ? घटनाले यो रुप लिँदा समेत सरकारले अपराधी संरक्षण गरेको शंका छ तपाईंहरूलाई ? किन गर्छ सरकारले आफै बद्नाम हुने गरेर यस्तो अपराधीको संरक्षण ? के बलात्कारी ओलीका आफन्त हुन् ? की गृहमन्त्रीका ? वास्तविक अपराधी सार्बजनिक गरेर सरकारलाई जनताको स्याब्बासीको ताली खाने रहर छैन होला ? जरुर छ ।
यहाँ अनुसन्धानको सबै प्रमाण सुरक्षा निकाय कै प्रहरीबाटै मेटिएपछी अनुसन्धान टोलिलाई समेत कठिन भएको छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले त निर्देशन दिने मात्रै हो । निर्देशन पाएकाहरूले काम गर्ने हो । सरकार यस घटनामा गम्भीर छ ।
फेसबुकमा अनावश्यक ठुला कुरा गर्ने, ट्विटरमा आदर्श को कुरा बोल्नेले बलात्कारी अपराधी समात्ने हो र? पत्रकारले बलात्कारीलाइ समाउन सक्छ ? एनजीओकर्मीले बलात्कारीलाइ समाउन सक्छ?
सक्तैनन् । बलात्कारीलाई समाउने र कार्वाही गर्ने काम सरकारको हो । सरकारले छानबिन पछि पत्ता लगाएर कार्वाही गर्छ । घटनाको सत्यतथ्य नजिक पुग्न सरकारलाई दबाब दिऔैं तर आफ्नो देशको नेतृत्वलाई आरोप लगाएर अपराधी पत्ता लगाउन भारतबाट मोदी आउदैन् ।
बलात्कार र हत्या काण्डको छानबिन गर्ने उच्चस्तरीय प्रहरी अनुसन्धान समितिले अनुसन्धानको लागि कंचनपुरका घटनामा सरोकार रहेका भनिएका १६ जना प्रहरीलाई बयानका लागि काठमाडौं ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले निर्मलाले न्याय पाउन ढिला भएको सत्य हो, यसमा मलाई पनि दुख छ । भोलि यस्तो घटना मेरै परिवारमा पनि घट्न सक्छ । त्यसैले म चिन्तित छु भनिसक्नु भयो । प्रधानमन्त्रीले बोलेको यही कुरा लाई पनि उडाउने तरीकाले प्रस्तुत भएको पाइन्छ । हुनै नहुने घटना घट्यो, घटना हुने बित्तिकै सजाय हुन पथ्र्याे हुन सकेन ढिलै भए पनि अपराधीले सजाय पाउनेछ र निर्मलाको आत्माले शान्ति पाउनेछ भन्नुभएको छ ।
प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले पनि यो अपराधमा सजाय दिलाउन कुनै केही कसर बाँकी राख्दिन, आफ्नै संस्थाको जो कोही भएपनि कार्वाही गर्न कठोर सजायको निम्ति सार्वजनिक गर्नेछु भनेर अहोरात्र खटिरहेको बेला सरकारलाई खबरदारी सँगै अपराधी पत्ता लगाउन सहयोग पनि गरौं ।
आलोचनाको एउटा प्रवित्ति र दायरा हुन्छ । सुझावपूर्ण आलोचनाको कसीमा सरकारलाई भन्नु एउटा कुरा हो, विरुद्धमा बोल्नु फरक कुरा हो । सरकार जिम्मेवार हुन्छ । तर, हर चिजको जिम्मा लिँदा त्यसको समय र सीमाको गतिमा पनि हुन्छ । निर्दोष नफँस्ने र दोषी नउम्कनेगरी सरकारले यस प्रकरणको परिणाम पक्कै दिनेछ
खबरदारीको नाउँमा सरकार विरोधि अपाच्य नारा लगाउनको तुक छैन तसर्थ संयम अपराधी पत्ता लगाउन र कार्वाहीको निम्ति सार्वजनिक गराउन सरकारलाई सहयोग सकारात्मक सहयोग गरौं । प्रधानमन्त्री अपराधशुन्य समाजको निर्माणकै लागि कटिबद्ध हुनुहुन्छ । उहाँको कार्यकालले दिने नै यस्ता घटनान्युन भएको समाज । हामी सुन्दर समाजको परिकल्पना, सुन्दर मुलुकको परिकल्पना गर्दा बलात्कारलाई सरकारविरोधी मूल नारा किन बनाउने ? हेर्नुस् सुन्दर भनिएको विश्वको गतिलो मुलुक अमेरिका बलात्कारको घटनामा १ नम्बरमा छ । हामी अमेरिका बन्न चहान्छौं तर बलात्कारशुन्य सपना बोकेर । यहि सपनाको जग भर्खरै बसेको छ । यसलाई स्थापित गराउनका लागि सरकारको हुर्मत लिने होइन, सरकारलाई सचेत हुने सृजनात्मक विरोधको आवश्यक छ ।
आलोचनाको एउटा प्रवित्ति र दायरा हुन्छ । सुझावपूर्ण आलोचनाको कसीमा सरकारलाई भन्नु एउटा कुरा हो, विरुद्धमा बोल्नु फरक कुरा हो । सरकार जिम्मेवार हुन्छ । तर, हर चिजको जिम्मा लिँदा त्यसको समय र सीमाको गतिमा पनि हुन्छ । निर्दोष नफँस्ने र दोषी नउम्कनेगरी सरकारले यस प्रकरणको परिणाम पक्कै दिनेछ ।